Choking Prevention - Be Smart, Don't Choke
गृहपृष्ठ / जीवन बचाउने / आफूलाई चोकिङबाट बचाउने
केले चोकिङको जोखिम बढाउँछ?
सामान्यतया, कुनै वस्तु मुखबाट भित्र वायुनलीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि “हावाको लागि स्वाँस्वाँ” (भय, आश्चर्य वा यतिकै “सास फुलेर”) हुने गर्छ ।
माथि हेरेर हावाको लागि स्वाँस्वाँ गर्नाले वायुनलीको बाहिर सोझो बाटो सिर्जना गर्दछ …
बोल्ने, हाँस्ने, रुने, दौडिने, उफ्रिने, पौडिने, साइकल चलाउने, बोर्डिङ, स्किइङ, स्केटिङ, पर्वतारोहण, कुर्सीलाई पछाडितिर ढल्काउने वा सन्तुलन गर्ने (सीढीमा, खाटमा वा सानो जहाजमा), यी सबैले तपाइलाई कुनै वस्तु सास फेर्दा तान्ने वा निल्ने सम्भावना हुन्छ।
चलिरहेको गाडीमा खाना खानु (विशेष गरी रोलरकोस्टरमा) सुरक्षित हुँदैन ’cause तपाईँ अचानक डराएर हावाको लागि स्वाँस्वाँ गर्न सक्नुहुन्छ ।
खानालाई फ्याँक्ने(टस गर्ने) र समात्ने गर्नु निश्चित रूपमा सुरक्षित छैन । यसले अरूलाई पनि खतरनाक गतिविधि सिकाउँछ ।
केले चोकिङको जोखिम घटाउँछ?
टेबलमा बसेर, ध्यानपूर्व र चुपचाप चपाउने र निल्ने (कुरा नगरी) ।
यो सुन्दा नरमाइलो लाग्न सक्छ तर यही नै सुरक्षित हुन्छ ।
कुन-कुन खाना चोकिङका जोखिम हुन् भनेर सम्झिनुहोस्।
माछा र कुखुरा निल्न तयार गर्दा विशेष हेरविचार गनुपर्छ (हड्डीको लागि तपाईँको जिब्रोले जाँच गर्नुहोला) ।
तपाईँको ओठको बीचमा कलमको बिर्को, बोटलको बिर्को, पिन, सियो वा अन्य हार्डवेयर कहिल्यै नराख्नुहोस्; आफ्नो मुखमा गम वा क्यान्डी खाँदै शारीरिक अभ्यास पनि नगर्नुहोस् ।
स्वस्थ बानीहरूको पोस्टर
कहिल्यै जेल क्यान्डी नकिन्नुहोला वा उपभोग नगर्नुहोला ।
एक मुठ्ठी बदाम वा अन्य खाना कहिल्यै निल्ने प्रयास नगर्नुहोला ।
कहिल्यै पनि खाना “स्कार्फ डाउन(हसुर्ने)”, “वुल्फ डाउन(नचपाई ठूलठूलो गाँस निल्ने)” वा “इनहेल(सासले तान्ने)” नगर्नुहोला ।
यदि तपाईँ आफ्नो फोक्सोको लागि इनहेलर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडि हरेक पटक भित्र कुनै वस्तु भएनभएको जाँच गर्नुहोस् । इनहेलरलाई खल्तीमा वा सिक्का सहितको झोलामा नराख्नुहोला ।[Ref:31]
खाने प्रतियोगिताहरू : ससेज, गुलाब जामुन र अन्य खाने प्रतियोगिताहरूमा वयस्कहरू चोक गरेर मृत्यु भएका छन् – वा मस्तिष्कमा गम्भीर क्षति भोगेका छन् ।
खानालाई टस गरेर मुखले समात्नु । वर्षौँ अघि, “स्कीटल्स” सँग “क्याचिङ द रेन्बो” एक रद्ध टेलिभिजन विज्ञापन द्धारा क्यान्डिलाई छोटो समयको लागि प्रबर्धन गरिएको थियो । आज, दुखको कुरा, धेरै वेबसाइटहरूले अंगुर जस्ता खानेकुरा समात्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ – र अंगुर पक्रने रेकर्ड पनि तोड्न खोजेका छन् ।
“चबी बनी” (एउटाको मुखमा मार्समेलो) हाल्नुः यो घातक दुर्घटना धेरै पटक घटिसकेको छ ।
“क्याटरपिलर” जुन ग्रासहेड्स(घाँसको बाला/चुच्चो)लाई जिब्रोमा राखी क्याटरपिलर शब्द दोहोर्याएर खेलिन्छ। यो खेल खेल्दा जसले क्याटरपिलर शब्द चोकिङ नगरी वा नरोकी दोहोर्याउन सक्छ, उही नै विजेता हुन्छ । कृपया याद गर्नुहोस्ः एउटा ग्रासहेड विशेष रूपमा खतरनाक बाह्य वस्तु (ब्रोन्कसबाट निकासी गर्ने मामलामा पेबलमा चर्चा गरे अनुसार) हो।[Ref:21]
दौडना र स्वाँ-स्वाँ गर्ने (च्यारियट्स अफ फायर बाट)
कायाकिङ गर्दा स्वाँ-स्वाँ गर्ने